စိတ်ကူးထဲက အသစ်များ: October 2010
သစ် ဒီနေ့စာလေးနည်းနည်း ရေးချင်နေမိပါတယ် ။ ဒီတော့ သစ်ငယ်ငယ်က အကြောင်းတွေ ရေးမယ်စိတ်ကူးမိပါတယ် ။ သစ်တို့မိသားစုရန်ကုန်ရောက်စက သမိုင်းလမ်းဆုံမှာ သူများအိမ်တစ်ဝက်ကိုငှားပြီး နေခဲ့ပါတယ် ။ ၃နှစ်လောက်ကြာတယ်ဆိုပါတော့ ။ နောက်ပိုင်းအင်းစိန်ဘက်မှာ မြေကွက်ဝယ်ပြီး နေလာလိုက်တာခုဆို သစ်သစ်တစ်သက်တောင် ရှိခဲ့ပါပြီ ။ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ တောမှာနေခဲ့တယ်ဆိုပါတော့ ဒီတော့ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တွေဆို အရမ်းတွေ့ဖူးချင်တာ မဆန်းပါဘူးလေ ။
တစ်ရက်ပေါ့ သစ်တို့၁အိမ်ကျော်မှာ နေတာက ကလေးသရုပ်ဆောင် အိသီရိလွင် နေပါတယ် ။ သူကရိုက်ကွင်းတွေသွား ပြန်လာရင် သစ်သစ်တို့ကို ရုပ်ရှင်မင်းသမီးအကြောင်းတွေပြော တမေ့တမောသွားနားထောင်ရတယ်ဆိုပါတော့ ။ ဒီတော့ သစ်ငယ်ငယ်လေးကတည်းက သဘောကျတဲ့ သရုပ်ဆောင်ကတော့ စိုးသူပါ ဆရာဝန်လည်းဖြစ် နာမည်လည်းကြီးဆိုတော့ အရမ်းကြိုက်ပါတယ် ။ ဒီလိုနဲ့ တနေ့သူငယ်ချင်းက သတင်းပေးပါတယ် လမ်းထိပ်က ဧကရီကျော်ကျော်ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်ဖွင့်ပွဲမှာ စိုးသူ တင်နီလာဝင်း အခြားသရုပ်ဆောင်တွေလာမယ်ပေါ့နော် ။ ဒါပေမယ့်အဲ့အချိန်မှာ သစ်သစ်ကျူရှင်ချိန်နဲ့ကလည်း တိုက်နေတော့ မကြည့်ရတော့ဘူးဆိုပြီး အတော်ကိုဝမ်းနည်းပက်လက် ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ် ။ ကျူရှင်ချိန်မှာလည်း အကြံတွေကထုတ်လို့ပေါ့ ။ ဒါနဲ့ကျူရှင်ပြန်တော့ လမ်းထိပ်ရောက်ချိန်မှာ လမ်းထဲကထွက်လာတဲ့ကားကြောင့် သစ်အိမ်ကဒရိုင်ဘာကြီးက ကားခဏရပ်လိုက်ပါတယ် ။ အဲ့အချိန်မှာ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တွေကားက ဖြတ်သွားတော့ စောင့်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးက ဝေါခနဲပြေးလိုက်သွားတာ တွေ့လိုက်ပါတယ် ။ ဒါနဲ့ဘာမှမစဉ်းစားတော့ပဲ လွယ်အိတ်ကို ကားထဲထားခဲ့ပြီး ကားမောင်းတဲ့ဦးမောင်ထွန်းကို အမေ့ကိုပြောလိုက် မုန့်သွားစားတယ်ဆိုပြီး လမ်းထိပ်မှာပဲ ခုန်ဆင်းကျန်ခဲ့ပါတယ် ။
စည်းကမ်းကြီးတဲ့အမေရိုက်မှာကိုလည်း သိပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် သစ်သစ်တစ်ယောက် စကတ်လေးဖလပ်ဖလပ်နဲ့ ကားနောက်ပြေးလိုက်ပါတယ် ။ လူအုပ်ကအရမ်းများတော့ တိုးမပေါက်ပါဘူး ။ သစ်သစ်အမ အပျိုတွေတသိုက်ကလည်း အဲ့လူအုပ်ထဲပါတာ မသိပါဘူး ။ အဲ့အချိန်စိုးသူကားက ပြေးနေတဲ့သစ်ဘေးမှာ စိုးသူထွက်ဖို့ရပ်လိုက်ပါတယ် ။ ၀မ်းသာအားရနဲ့စိုးသူကိုကြည့်မယ်ပြင်နေတုန်း လူအုပ်ကြီးနောက်ကပိပြီး သစ်သစ်မျက်နှာ စိုးသူကားရဲ့မှန်မှာကပ်နေပါတယ် ။ ရုန်းလို့လည်းမရ အော်လို့လည်းမရတော့ အသားကုန်အော်ငိုလိုက်ပါတယ် ။ သစ်သစ်အသံကတိုးလို့တောင်မပေါက်ပါဘူး ။ စိုးသူလည်းတံခါးဖွင့်မရပါဘူးလေ အဲ့အချိန်မီးသတ်သမားတွေက စိုးသူဆင်းဖို့လမ်းကြောင်းရှင်းတော့မှာ သစ်သစ်မယ်မျက်ရည်တွေနှပ်ချီးတွေ ဂျီးကြောင်းတွေနဲ့ ကားနားကခွာရပါတယ် ။ အဲ့နေ့က စိုးသူကသနားလို့ထင်ပါတယ် ရင်ထိုးလေးသစ်သစ်ကိုပေးသွားခဲ့တာ ခုထိရန်ကုန်အိမ်မှာ ရှိပါသေးတယ် ။ အဲ့အချိန်မှ သစ်သစ်အမကလည်း သစ်သစ်ကိုတွေ့ပြီး ငါ့ညီမလေးဆိုပြီး အိမ်ပြန်ခေါ်လာခဲ့ပါတယ် ။
ဘာပြောကောင်းမလဲ အမေကကြိမ်လုံးနဲ့ ခြံထိပ်ကစောင့်နေပြီး အသားကုန်ဆော်ပါတော့တယ် ။ သစ်သစ်အမခေါ်သွားတယ်ထင်ပြီး အမကိုပါဆော်ပါတယ် ။ အိမ်ကိုပတ်ပြေး ခြံထဲပတ်ပြေး အုန်းပင်ကြားတွေပတ်ပြေးနဲ့ အမေလည်းအတော်ညောင်းသွားပါတယ် ။ သစ်သစ်ကပြေးသာပြေးနေတာ ပါးစပ်ကလည်း အမေကစိုးသူဆီခေါ်သွားပေးလို့လား ကိုယ့်ဘာသာသွားကြည့်တာပဲ သမီးကစိုးသူလို အဆိုတော်ဆရာဝန်လုပ်ချင်တာ မျိုးစုံရွတ်ပြီး အော်ငိုနေတော့ လိုက်ဆွဲတဲ့ ကားမောင်းတဲ့ဦးမောင်ထွန်းမှာ ခုထိသစ်ကိုတွေ့ရင် ပြောမဆုံးသေးပါဘူး ။ တကယ်ဆိုးတဲ့သစ်သစ်ပါ..... ဟိ။ နောက်အပျိုပေါက်ဖြစ်လာတော့ ကျောင်းနားက စီအိုင်ဒီထဲမှာ ဒွေး ရုပ်ရှင်လာရိုက်လို့ သွားကြည့်တဲ့အကြောင်း ထပ်ရေးပါဦးမယ် ။ သေချာတာကတော့ သစ်ငယ်စဉ်ကအလွန်တရာ ကွန်ပလိန်းတက်တဲ့သူဆိုတာ ငယ်ဘ၀မှတ်တမ်းတွေကြည့်လို့ သိနိုင်ပါတယ် ။ ခုတော့လည်း အဲဒီငယ်စဉ်အချိန်လေးတွေ တကယ်ကိုပြန်လိုချင်နေမိပါတယ် ။ သတိရတယ်ကွယ်.......
Posted by သစ်သစ် at 2:18 PM5comments
ဒီနေ့ သစ်သစ်တော်တော်လေး စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ် ။ သစ်သစ် သူပြန်မယ်ဆိုတာ သိပေမယ့် တကယ်ပြန်မယ့်နေ့ကို ရင်မဆိုင်ရဲခဲ့ပါဘူး ။ အမြဲလိုလိုလည်း ရှောင်နေမိတယ် သူမပြန်ဖြစ်တော့ဘူးလို့ ပြောမှာကိုနေ့စဉ်လိုလားစွာ တောင်းတမိခဲ့တယ် ။ သစ်ဆုတောင်းမပြည့်ခဲ့ဘူးလို့ ဆိုရမယ် ဒီနေ့ညနေ သူအော့ဖ်လိုင်းလေးနဲ့ သူစနေနေ့ပြန်တော့မယ်တဲ့လေ ။ သစ်ကြိုတင်မျှော်လင့်ထားပေမယ့် တကယ်တမ်းကျတော့ မျက်ရည်တွေတားဆီးမရစွာ စီးကျလာခဲ့ပြန်တယ် ။
ရုံးဆင်းဆင်းချင်းဖုန်းတွေဆက်တိုက် ခေါ်ပေမယ့် သူမကိုင်တော့ပါဘူး သစ် သူ့အသံကိုတောင် ကြားခွင့်မရှိတော့ဘူးလား ဘုရားရေ သူမနေ့ညက သစ်ကိုဖုန်းဆက်သေးတယ် အဲ့အချိန်မှာသစ်စာသင်ခန်းထဲရောက်နေတော့ သူ့ဆီကိုအလွယ်တကူ မရောက်ခဲ့ဘူး ။ နောက်ဆုံးဆိုတာသိခဲ့ရင် သစ်အတန်းဖျက်ခဲ့မိမှာ သေချာတယ် ။ သစ်သူ့ကိုသိပ်တွေ့ချင်တယ် သူ့ကို သစ်မပြောလိုက်ရတဲ့ စကားလုံးများစွာ ရှိနေသေးတယ် ။ သူလိုအပ်ချိန်မှာ သစ်တာဝန်မကျေခဲ့ဘူး သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက် မဖြစ်ခဲ့မိဘူး ။ နာကျင်မှုတွေလူးလှိမ့်ခံစားနေရတဲ့ကြားက သစ်ပူလောင်နေချိန်မှာ သူအရောက်လာခဲ့တယ် သစ်ကိုအားပေးခဲ့တယ် သစ်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် သူလုပ်ပေးခဲ့တယ် ။ သစ်လောက်မိုက်မဲတဲ့သူရှိပါဦးမလား နောင်ဘယ်အချိန်ဆုံမှာ မသိနိုင်တော့တဲ့သူတစ်ယောက်ကို သစ်လစ်ဟင်းမှုတွေရှိခဲ့တယ် ။ တောင်းပန်ပါတယ် သူငယ်ချင်းလေးရယ် သစ်ကိုဘယ်တော့မှခွင့်မလွှတ်ပါနဲ့ ။ သစ်ဘ၀မှာမင်းနဲ့ဖုန်းပြောခဲ့ရတဲ့ညတွေကို ဘယ်တော့မှမေ့နိုင်တော့မယ် မထင်ပါဘူး ။
သစ်ဒီနေ့သင်တန်းကပြန်လာတော့ စဉ်းစားမိတယ် ကိုယ်မင်းနဲ့စတွေ့ခဲ့တဲ့နေ့လေးကိုပေါ့ ။ တောင်တက်ဖို့လူတွေစုတော့ မင်းဆိုတာဘယ်သူမှန်းမသိဘူး ဒါပေမယ့်ဖုန်းတွေကဆက်နေတော့ အသံကိုမှတ်မိနေတယ် ။ အမြဲတမ်းသစ်ကလေးလို့ ခေါ်တတ်တဲ့ခေါ်နေသံကိုလည်းမှတ်မိနေခဲ့တယ် ။ သူငယ်ချင်းတွေ ဂရုဏာဒေါသတွေနဲ့ပြောသမျှကို ပန်းနဲ့ပေါက်သလိုမင်းခံယူခဲ့ဘူးတယ် ။ ဘယ်သူတွေဘာပြောပြော မင်းလုပ်ချင်ရာကိုယ်ပဲလုပ်ခဲ့တဲ့ တဇွတ်ထိုးစိတ်လေးကိုလည်း ကိုယ်ရိပ်မိခဲ့တယ် ။ မင်းရင်ထဲကဝေဒနာတွေကို သူငယ်ချင်းတွေကိုမသိစေခဲ့ဘူး ။ တို့တွေအတူတူကျောင်းဝင်ခွင့်တွေဖြေခဲ့ဘူးတယ် ထမင်းတွေအတူစားခဲ့ဘူးတယ် ခြင်္သေ့ကြီးနားမှာ မျိုးနဲ့အတူတူ စကားတွေများစွာပြောခဲ့ဘူးတယ် ။ မရေရာတဲ့အနာဂတ်တွေထဲမှာ ကိုယ်တို့တွေအတူ လမ်းလျှောက်ခဲ့ဘူးတယ် ။ သူငယ်ချင်းရယ် ခုချိန်မှာကိုယ်ရေးနေတဲ့စာထက် ပြောချင်တာများစွာရှိခဲ့တယ် ။
ဘ၀မှာကျဆုံးချိန် နာကျင်ရချိန် ၀မ်းနည်းနေရချိန်တွေများစွာ ရှိပါတယ် ။ သစ်ကိုယ်တိုင်လည်း မတူရင်တောင် ထပ်တူနီးပါးဒီလိုမျိုးတွေ ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ် ။ ခုချိန်ထိလည်း သစ်ရပ်တည်ဖို့ စဉ်းစားနေခဲ့တယ် ။ ဒါပေမယ့် သစ် မင်းလို မဆုံးဖြတ်ရဲခဲ့ဘူး မပြတ်သားခဲ့ဘူး မဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတာ သိပေမယ့် ကိုယ့်ရင်ထဲက မင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကို တိတ်တခိုး အားကျနေခဲ့မိတယ် ။ နာကျင်မှုတွေထဲမှာ ဖော်ပြလို့မရတဲ့ ဒီခံစားမှုမျိုးကို သစ်နားလည်တယ်ဆိုရင် မင်းယုံမယ်မထင်ဘူး ။ တချိန်မင်းပြန်လာခဲ့ရင် လူသစ်စိတ်သစ်ဘ၀သစ်မှာ ပျော်ရွှင်တက်ကြွတဲ့သူတစ်ယောက် အဖြစ် သစ်မျှော်လင့်မိပါတယ် ။ ၉. ၁၀. ၂၀၁၀ ညက မင်းပြောခဲ့တဲ့စကားလုံးတွေကို ကိုယ့်ရင်ထဲမှာတစ်သက်လုံးမှတ်ထားပါ့မယ် ။ မင်းထွက်ခွာမသွားခင်မှာ တစ်ခုလောက်တော့မှတ်သွားပေးပါနော် ကိုယ် မင်းကိုသိပ်ချစ်ပါတယ် သူငယ်ချင်းရယ်...... ။
Posted by သစ်သစ် at 10:54 PM0comments